Home Somali News Yemen: 30 qof oo Soomaali ah ayaa lagu diley weerar ka dhacay...
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in muwaadinin Soomaaliyeed lagu laayey weerar ka dhacay meel ku dhow magaalada Cadan.
Ugu yaraan 30-qof oo Soomaali ah oo la socday labo bus oo kasoo baxay xero qaxooti kuna sii jeeday magaalada Cadan ayaa waxaa ku dhacay madfac aan la aqoon halka laga soo riday axaddii lasoo dhaafay. Balse tirada saxda ah ee Soomaalida dhimatey ayaan la ogeyn.
Qunsulka Safaaradda Soomaaliya ee Yemen Cismaan Axmed Maxamuud ayaa wareysi uu siiyey VOA-da sheegay in labada gaari ay ka baxeen jidkii caadiga oo ay ku socdaalayeen iyagoo wixii xilliga ka dambeeyay ay ciidan kasoo baxeen.
‘’ Labo gaari bay ahaayeen jidkii loogu talagalay bay ka leexdeen, kadibna Ciidan baa kusoo baxay waxay damceen in gawaarida istaajiyaan oo eegaan waxyar kadib saarukh baa ku dhacay meelna uu kasoo dhacay lama garanaayo,’’ ayuu yiri Qunsulka.
Soomaali badan ayaa ku xaniban colaadaha ka taagan Yemen iyadoo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay ku guuldareysatay in ay u dhaqaaqdo samata-bixintooda, walow masuuliyinta Dowladda ay ku celceliyeen in ay gurmad u dirayaan.
Kumanaan qaxooti ah ayaa u surtogashay in ay iskood uga soo baxsadaan colaada iyagoo dhinaca Badda kasoo raacaya doonyo.
Dowladda Federaalka ayaa taageero balaaran u muujisay howlgalka ka dhanka jabhadda Xuutiyinta ee uu hogaaminayo Sacuudiga, waxayna walaac ku abuurtay qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Yemen.